कोरोना कहर: अष्ट्रेलियामा संक्रमण घट्दै, नेपाली विद्यार्थीहरुको अवस्था के छ ? – korea pati
कोरोना कहर: अष्ट्रेलियामा संक्रमण घट्दै, नेपाली विद्यार्थीहरुको अवस्था के छ ?
April 23, 2020 Korea patiLeaveaComment on कोरोना कहर: अष्ट्रेलियामा संक्रमण घट्दै, नेपाली विद्यार्थीहरुको अवस्था के छ ?
अष्ट्रेलिया– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोपले विश्वका कयौं देशहरु आक्रान्त बनिरहँदा अष्ट्रेलियामा भने संक्रमण घट्ने क्रममा छ ।करिब एक लाख ५० हजारको संख्यामा नेपालीहरुको बसोबास रहेको अष्ट्रेलियामा ६० हजार नेपाली विद्यार्थीहरु छन् । अष्ट्रेलियामा कोरोनाको कहरले रोजगारी गुमाउनेदेखि विद्यार्थीहरुको शैक्षिक भविष्यमै प्रश्न उठ्ने गरी कोरोनाले प्रभाव परेको छ ।
तर पछिल्लो समय संक्रमणमा सुधार देखिन थालेपछि भने नेपालीहरुमा केही आशा पलाएको छ ।हालसम्म ६ हजार ६ सय ४९ जना संक्रमितहरु अष्ट्रेलियामा छन् । त्यसमध्ये करिब ५ हजार जनाले स्वास्थ्यलाभ गरेका छन् । यहाँ कोरोना संक्रमणको मृत्युदर भने निकै कम छ । संक्रमणमा परी मात्र ७४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
पछिल्लो समय संक्रमितको वृद्धिदर अझै घट्दै जाने अनुमान गरिएको छ । नागरिकहरुले सरकारसँग राम्रो समन्वय गरेका कारण अष्ट्रेलियामा संक्रमण निमूर्लिकरणको बाटोमा अघि बढेको हो ।खबरहवका लागि अष्ट्रेलिया सहकर्मी सरल गुरुङका अनुसार आंशिक रुपमा चलेको लकडाउन पछिल्लो समय खुकूलो पारिएको छ ।बन्दबन्दीको अवस्थामा रहेका कलेज तथा विश्वविद्यालयहरुले अनलाईन कक्षाहरु संचालन गरिरहेका छन् । सरकारले आंशिक रुपमा बन्द भएका अन्य सेवाहरु विस्तार चालु राख्न थालेको छ । अष्ट्रेलियाका समुन्द्री तटहरु पनि विस्तारै पहिलेकै अवस्थामा फर्किन थालेका छन् ।
अष्ट्रेलियामा रहेर अध्यापन गराउँदैं आएका सञ्चार तथा विपत व्यवस्थापन विद् डा. भरतराज पौडेलले कोरोना संक्रमणसंग अष्ट्रेलियाले सहज जित प्राप्त गरेको बताए । उनले सम्भावित हुने सक्ने संक्रमणको जोखिमसंग यो देशले समयमै सर्तकता अपनाएका कारण महामारीको अवस्था झेल्नु नपरेको बताए । उनले भने, ‘अष्ट्रेलियाले पूर्ण सर्तकता अपनाएको छ । मानिसहरुमा समेत सचेतता फैलिएको छ । जसले महामारीको प्रकोपसंग लड्न अष्ट्रेलियालाई सहज बनेको हो ।’उनले सञ्चारकर्मी गुरुङसंगको विशेष कुराकानीमा अष्ट्रेलियामा नयाँ संक्रमितहरु घटेको बताए । अधिकांश नेपाली न्यू साउथ वेल्स राज्यको सिड्नी र भिक्टोरियाको मेलबर्न शहरमा बसोबास गर्नेहरुको छ । कोरोनाको प्रभाव अन्य क्षेत्र भन्दा यीनै क्षेत्रमा बढी पाइएको छ ।
यहाँ रहेका अधिकांश नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत छन् । अष्ट्रेलियाको सिड्नी, मेलबर्न र तास्मनिया गरी ८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । तर अहिले उनीहरुको अवस्था सामान्य भइसकेको छ । यहाँ बस्ने नेपालीहरु सेवाको क्षेत्रमा बढी कार्यरत छन् । अष्ट्रेलियामा अहिले २४ प्रतिशत मानिसले जागिर गुमाएका छन् ।डाक्टर पौडेलले अष्ट्रेलियामा चर्चा गरिएअनुसार जागिरहरु नगुमेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘तथ्यांकमा २४ प्रतिशतमात्रै जागिर गुमेको छ । बाहिर हल्ला चले जस्तो मानिसहरुले जागिर गुमाएका छैनन् । त्यसमा पनि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा १८ प्रतिशतले मात्रै जागिर गुमाएका छन् । अष्ट्रेलियाको तथ्यांकलाई हेर्दा यहाँ ५.१ प्रतिशत बेरोजगारी छन् । पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा बेरोजगारको समस्या हल हुने अवस्थामा छ ।’
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिनु अघि नेपाली विद्यार्थीको मुख्य रोजगार क्षेत्र होटेल, रेष्टुराँ, क्याफेहरु थिए । बन्दाबन्दीको प्रभावमा परेका यी क्षेत्र अहिले खुल्ने थालेका छन् । तर अहिले नै नेपाली विद्यार्थीको रोजगार पहिलेकै अवस्थामा फर्किन सक्ने सम्भावना भने चुनौतीपूर्ण छ ।डाक्टर पौडेलले रोजगारीका क्षेत्र पहिलेकै अवस्थामा आउन अझै एक बर्ष लाग्नसक्ने अनुमान गरे । उनले विश्वव्यापी समस्या बनेको कोभिड–१९ ले सवैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्रमा असर परेको अल्याउदै भने, ‘रोजगारीहरु पहिलेकै अवस्थामा फर्किन यहाँ पर्यटन अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । अन्य मुलुकबाट भित्रिने पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य सुधार आउनु पर्छ । अन्य व्यवसायीकलाई द्रृत गति दिनुपर्छ । तर यी कुराहरु सुधार आउन केही समय लाग्छ ।’ उनले विद्यार्थीको योग्यता क्षमताका आधारमा पनि रोजगारी निर्धारण हुने उल्लेख गरे ।
अष्ट्रेलियामा नर्सिङ अध्ययन गरिरहेकालाई सरकारले कुनै निश्चित अवधि नतोकि पूर्णकालिन काम गर्ने वातावरण दिएको छ । अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत विद्यार्थीको मुख्य समस्या भने कलेज शूल्क र घर भाडा हो । यहाँ बसोबास गर्ने एक विद्यार्थीले न्यूनतम एक सय डलर घर भाडा एक हप्ताको बुझाउनुपर्छ । काम नपाएपछि कतिपय विद्यार्थीले यस्ता समस्या पनि भोग्ने गरेका छन् ।अहिले विद्यार्थीहरुका समस्या सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग समेत उठेको छ । हाल अष्ट्रेलियामा रहेका ४३ वटा विश्वविद्यालयमध्ये २९ वटा विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुका लागि राहत पनि दिदै आएका छन् । उनीहरुले विद्यार्थीलाई सय डलरदेखि २ हजार डलरसम्म विद्यार्थी नगद राहत उपलब्ध गराउने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा ऋण लिन पाउने सुविधा पनि यहाँका विश्वविद्यालयहरुमा छ । यसका लागि विद्यार्थीले आफ्नो अवस्थाका बारेमा विश्वविद्यालयलाई जानकारी गराउन आवश्यक छ ।
अष्ट्रेलियामा अहिले नेपाली विद्यार्थीहरुको छाता संगठन अष्ट्रेलियन एजुकेशसन कन्सल्ट्यान्ट अनलाईन ‘एक्का’ले ५ लाख डलरको कोष स्थापना गर्ने तयारी समेत गरेको छ । अन्य केही कन्सल्ट्यान्सीले पनि विद्यार्थीहरुलाई मध्यनजर गरी कोषहरु स्थापना गरेका छन् । यसबाट आर्थिक विपन्नता भएका विद्यार्थीहरुले सहायता पाउने लक्ष्य राखिएको छ ।अस्ट्रेलियन सरकार र केन्द्रिय बैंकले देशको अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसले पारेको असरलाई समाधान गर्न ३ सय २० अस्ट्रेलियन डलरको आर्थिक प्याकेज ल्याउने उद्घोष गरिसकेको छ ।
यी सामान्य कुरा, जसले रोगमुक्त जीवन बाँच्न सहयोग गर्छ